China N'èzí Outing Utility Collapsible ịkpakọba Cart Manufacturer and Supplier | Ruiyi
N'èzí Outing Utility Collapsible ịkpakọba Cart
Choicegbọ ala nhọrọ nke izizi maka ịpụpụta ihe eji arụ ọrụ na mpụga, nke dabara adaba, bara uru ma rụọ ọrụ nke ọma. nchekwa gburugburu ebe obibi.
Ọ dị mfe ibufe: enwere ike ịgbakọta na sekọnd, enweghị nzukọ achọrọ! Enwere ike apịa ya n'ime akpa aka maka nchekwa dị mfe. Obere, dị mma maka itinye n'ime kaboodu, mgbidi ma ọ bụ ogwe ụgbọ ala ọkọlọtọ ọ bụla. Cargbọ ala na-ada ada nke dabara adaba maka ịzụ ahịa njem, njem ezinụlọ ma ọ bụ dị ka ngwongwo ngwaahịa, dabara adaba maka njem, njem, ezumike, ogige, ogige, ogige, ụlọ ahịa nri, ebe a na-egwu egwuregwu, egwuregwu egwuregwu n'èzí ma ọ bụ naanị ịmegharị ihe.
Akpa nhọrọ maka ụgbọ ala nhọrọ N'èzí Outing Utility Collapsible ịkpakọba Cart, nke adaba, bara uru na oru oma. nchekwa gburugburu ebe obibi.
Mfe ibufe: enwere ike ịgbakọta na sekọnd, enweghị nzukọ achọrọ! Enwere ike apịa ya n'ime akpa aka maka nchekwa dị mfe. Obere, dị mma maka itinye n'ime kaboodu, mgbidi ma ọ bụ ogwe ụgbọ ala ọkọlọtọ ọ bụla. Cargbọ ala na-ada ada nke dabara adaba maka ịzụ ahịa njem, njem ezinụlọ ma ọ bụ dị ka ngwongwo ngwaahịa, dabara adaba maka njem, njem, ezumike, ogige, ogige, ogige, ụlọ ahịa nri, ebe a na-egwu egwuregwu, egwuregwu egwuregwu n'èzí ma ọ bụ naanị ịmegharị ihe.
Atụmatụ gụnyere: edozi edozi maka mfe ibugharị, yana ndị na-ejide iko 2 mesh hụ na nchekwa ihe ọverageụverageụ
Adaba njem-adabara adaba maka iburu akụrụngwa n'èzí egwuregwu, egwuregwu, njem nlegharị anya, dabara adaba maka ojiji n'ụlọ. Biko rịba ama na ọ gaghị adabara maka ibugharị ụmụaka.
Kwaa ma ọ bụ dọpụta:retractable ịlesụ na kemeghi push-esiri ịlesụ dị n'ihi na ị na-ahọrọ. Ezigbo mma maka ojiji n'ogige, njem ezinụlọ ma ọ bụ dị ka ngwongwo ngwongwo, dabara adaba maka ịga osimiri, ịma ụlọikwuu, egwuregwu egwuregwu n'èzí na oge ọ bụla i chere kwesịrị ekwesị.
Mbughari kanopi na azụ nkata. Ulo mbughari ga-echebe ihe gị site na mmiri ozuzo na ụzarị ultraviolet ọ bụla. Azụ azụ na-eme ka nchekwa dịkwuo mfe.
Humanized imewe:ụgbọala a nwere ụkwụ anọ nwere breeki n’iru na n’azụ iji chịkwaa mmegharị ya mgbe a na-akwagharị ya ma ọ bụ na-adọ ya. Ogologo nke ụgbọala na-adọkpụ nwere ike iru sentimita 44 (ihe dịka 111.76 cm), na-enye gị ohere ịdọrọ ụgbọala na-adọkpụ n'ụzọ dị nkasi obi.
Ngwa ngwa ngwa na nchekwa: kọmpat imewe, apịaji n'ime Obere size, i nwere ike n'ogige atụrụ na otu aka; ịzọpụta oge na ohere, adaba ibu niile gị ubi mkpa.
Kemeghi aka: na kemeghi njikwa, ọ nwere ike bugharia lorịị dị ka mkpa; aka agaghị ada, a ga-ekpochikwa elu ahụ site na nkwonkwo; ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị banyere ụgbọ ịnyịnya a na-achịkwaghị achịkwa.
Obere, nchekwa nchekwa: enwere ike apịaji ya na kọmpat ma tinye ya n'ime ihe eji eso ya maka nchekwa n'ime akpati ụgbọ ala ma ọ bụ nchekwa.
ihe Mba NK02
Ihe onwunwe Nchara na 600D polyester
Nha 67 × 41 × 46cm
Nha folda 46 × 17cm
Ibu ibu 7.4kgs
Mbukota 1pc / akpa
ihe Mba OBI3
Nha folda 76x30x20cm
Ibu ibu 11kgs
Akwa 600D oxford
Ihe onwunwe Ngwongwo ígwè
Ejiri Maa ụlọikwuu，osimiri，ịkụ azụ
♦ Ihe ngosi
Enwere ike iji ngwaahịa a n'ọtụtụ oge ezumike n'èzí, dị ka ịga ogige maka ezumike, ịga n'èzí nwere ike iji ụfọdụ nri, mmiri, ihe oriri na ihe ndị ọzọ. Gaa n'ọhịa ihe osise, oge ezumike, wdg. Enwere ike iji ihe ndị dị mkpa, dị mfe iji. Wgbọ ala a zuru oke maka njem gaa ahịa, ogige, osimiri, ihe omume egwuregwu, ịma ụlọikwuu, na ọtụtụ ndị ọzọ!
Ngwaahịa a dị mfe iji wụnye. Biko rụtụ aka na nwụnye na ọrụ ntuziaka.
Tinye zipu ihe ozi-e ka sales@ruiyitools.com
Ndị ahịa n'ozuzu na-egosipụta na mmetụta ojiji dị mma, ọrụ dị mfe, ntinye dị mfe na ogo dị elu.
Bụrụ onye zụrụ ọzọ iji nyochaa ihe a.
Aha Rand Junmei
Ngwa N'èzí Beach Hiking Camping Njem
Osote: High Quality Loading Car idozi ramp
Vehiclegbọ njem ntụrụndụ n'èzí
PU Wheel, China Pu ụfụfụ Wheel, Concrete igwekota Truck, Caster ụkwụ anọ, China PU wiil, China Concrete igwekota,